အုပ်ချုပ်ရေး Archives - Page4of5- ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့
Home / အုပ်ချုပ်ရေး (page 4)
မှတ်ချက်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဒေသအလိုက် အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပမည့် ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၉-၂၀-၂၁)ရက်နေ့အစား ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၆-၂၇-၂၈)ရက်နေ့သို့ ပြောင်းလဲလိုက်ကြောင်း သိရှိနိုင်ပါရန်——-
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပနိုင်ရေး အကြိုညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်
ဖေဖော်ဝါရီ ၉ (ပဲခူး) ============================ (၉.၂.၂၀၁၇)ရက်နေ့၊ နံနက်(၀၉:၀၀)နာရီအချိန်က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ တော်ဝင်ဟံသာခန်းမ၌ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပနိုင်ရေး အကြို ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်းနှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ၊ တရားသူကြီးချုပ်၊ ဥပဒေချုပ်၊ ရှေ့နေချုပ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့၊အတွင်းရေးမှူး ဦးတိုးဝင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ တက်ရောက်ကြသည်။ အစည်းအဝေး၌ ဝန်ကြီးချုပ်က ယခုအစည်းအဝေးသည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် အဓိကထား ရွေးချယ်ထားသည့် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများရှိကြောင်း၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး သည် ကရင်ပြည်နယ်နှင့် နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေကြောင်း၊ ဒါကြောင့် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်နှင့် ခရိုင်အဆင့် ဆွေးနွေးပွဲများကို တောင်ငူခရိုင်၌ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲသည် လူမျိုးအလိုက်သော်လည်းကောင်း၊ ဒေသအလိုက်သော် လည်းကောင်း၊ …
ဒီဇင်ဘာ ၂၂ (ပဲခူး) ========================= (၂၂.၁၂.၂၀၁၆)ရက်နေ့၊ နံနက်(၀၉:၀၀)နာရီအချိန်က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်းထံသို့ ရန်ကုန်မြို့၊ အစ္စရေးနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Daniel Zonshine ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး ဦးအောင်ဇော်နိုင်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးလှမင်းထွဋ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ရှေးဦးစွာ H.E. Mr. Daniel Zonshine က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် လာရောက်တွေ့ဆုံရခြင်းသည် မိမိတို့ဘက်မှ စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်များနှင့် မိတ်ဆက်ပေးပြီး ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများအား အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် လာရောက်တွေ့ဆုံရခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ဘက်မှ ဓါတ်မြေသြဇာ၊ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာ၊ မျိုးစေ့နှင့် အဆင့်မြင့်စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ထွက်ရှိသည့် သီနှံများကိုလည်း ပြန်လည်ဝယ်ယူပြီး …
ညောင်လေးပင်မြို့နယ်အတွင်း အသစ်တည်ဆောက်မည့် ပန်းတာတည်နေရာအား ကြည့်ရှု့စစ်ဆေး
အောက်တိုဘာ ၂၅ ——————– ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ(၁၃:၀၀)အချိန်က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးခရိုင်၊ ညောင်လေးပင်မြို့နယ်တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရန်ပုံငွေဖြင့် စစ်တောင်းမြစ်ရေကြီးမှု ကာကွယ်ရန်အတွက် စစ်တောင်းတာမိုင်( ၃၈/၅ မှ ၃၉/၃ )အတွင်း ပန်းတာအသစ်တည်ဆောက်မည့် တည်နေရာအား ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး ဦးအောင်ဇော်နိုင် သွားရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဝန်ကြီးက တာလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပါက တာကြံ့ခိုင်ရေး၊ ရေရှည်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရန်မှာ ဒေသခံပြည်သူများ၏ တာဝန်ဖြစ်ကြောင်း ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနမှ ကွင်းဆင်း၍ အသိပညာပေး စည်းရုံးရန် မှာကြားခဲ့သည်။
ဝန်ကြီးချုပ်ထံသို့ ONGC Videsh Ltd မှ Mr. Sudhir Sharma ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်များ လာရောက်တွေ့ဆုံ
အောက်တိုဘာလ ၂၄ (ပဲခူး) ————————- (၂၄.၁၀.၂၀၁၆)ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ(၁၃:၀၀)အချိန်က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ ဝန်ကြီးချုပ်ထံသို့ ONGC Videsh Ltd မှ Mr. Sudhir Sharma ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်များ လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ တွေ့ဆုံပွဲသို့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်း၊ လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ခင်မောင်ဌေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး ဦးအောင်ဇော်နိုင်၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး ဦးညွန့်ရွှေ၊ စည်ပင်သာယာရေးနှင့် လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်လွင်၊ သယံဇတသစ်တောနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး ဦးကျော်မင်းစံ၊ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးတိုးဝင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးအဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ တွေ့ဆုံပွဲ၌ ONGC Videsh Ltd ၏ Director-Exploration, Mr. Sudhir Sharma …
စက်တင်ဘာ ၈ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့၊ နံနက်(၉)နာရီအချိန်က ပဲခူးမြို့၊ မြို့တော်ခန်းမ၌ ၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုင်ငံတကာစာတတ်မြောက်ရေးနေ့ အခမ်းအနားကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အခမ်းအနားသို့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ၊ တရားသူကြီးချုပ်၊ ဥပဒေချုပ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့် တိုင်းအဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ပညာရေးဝန်ထမ်းများ၊ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြ သည်။ ရှေးဦးစွာ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများက” မြန်မာ့ကျောင်း”သီချင်း၊ “ဒို့အင်ဒို့အား”သီချင်းနှင့် “ပြည်သူခေါ်သောလမ်း” သီချင်းများဖြင့် သီဆိုဖျော်ဖြေ တင်ဆက်ပြီး ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်းမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် တိုင်းဒေသကြီးပညာရေးမှူးတာဝန်ခံဆရာမကြီး ဒေါ်မြင့်မြင့်သန်းက နိုင်ငံတကာစာတတ်မြောက်ရေးအခမ်းနားသို့ ပေးပို့သည့် ယူနက်စကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ သဝဏ်လွှာကို ဖတ်ကြားပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုင်ငံတကာစာတတ်မြောက်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခြေခံပညာ အထက်တန်း၊ အလယ်တန်း၊ မူလတန်း အဆင့် စာစီစာကုံး၊ …